Ingabe kunzima ukugibela ibhayisikili elihamba ngasikhathi sinye? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > I-Tandem bike - izixazululo ezintsha
I-Tandem bike - izixazululo ezintsha
Ingabe kunzima ukugibela ibhayisikili elihamba ngasikhathi sinye?
Ngenkathiukugibelaumuntu (2 umuntuibhayisikili)umbandelaayiyonakunzima, kwehlukile kuneukugibelaokukodwaibhayisikili. “Ukubopha itandeming” mhlawumbe kuwumdlalo omusha kuwe; sithanda ukukufanisa nokudansa.
Ngabe kukhona owake wakutshela ukuthi ubukeka umuhle esihlalweni sebhayisikili elakhiwe kabili, angeke athi bane-Dave, kepha kuzwakala sengathi usho ibhayisikili elihamba eceleni uma ufuna ukuhamba nami ibhayisikili uvele uzibuze . Ngiphinde futhi ngibhekise kubhayisikili elidala eliwumugqa, kuyindlela enhle yokuthi abantu emphakathini ongaboni bakwazi ukujabulela injabulo yomgwaqo ovulekile futhi kwenzeka ukuthi kube ngenye yezinto ezithandwa kakhulu ngumsingathi weHalifax, uLaura Baines, nokuba Ibhayisikili le-Starta -Isizini nguLaura uthathe isinqumo sokuthi sekuyisikhathi sokuthatha ibhayisikili lakhe ukuze lishube Ngiyazi ukuthi ezinye izingane ezingaboni kahle zigibela amabhayisikili anzima kodwa angizange ngibe omunye walabo futhi lapho ngithola umugqa wami ngabona ukuthi kuncane kangakanani engangikwazi mayelana nokugcinwa kwamabhayisikili okuyisisekelo ukugibela ibhayisikili kuRoger Nelson kwaHalifax ukuthola iseluleko sochwepheshe ngapha, sinebhayisikili lami elingaphansi emoyeni emoyeni wokulungisa futhi ngikulungele ukufika emsebenzini ngakho kungani ungasho ukuthi yini esizoyenza kuqala? Indawo Esifuna Ukuyijwayela Lapho nje sesiqale ukushuna ibhayisikili elinjengaleli, sivele siqale ngokulihlanza, ngakho-ke sifafaze kancane okokuhlanza okusika amanzi ngaphansi kwendwangu yakho, sizokusebenzisa ukuhlanza ifreyimu ngokuphelele ngebhayisikili futhi ngiyini? funa noma uzwe, uma ngihlanza ibhayisikili kanjena, sizomane sisule ukungcola nothuli ebhayisikilini, ngakho-ke ake siqale phambili bese siya emuva kulokho okwenzayo. Kuphela qaphela amaphutha ohlakeni, uma kukhona ukuqhekeka noma isifaca noma okunye okunjalo, kufanele wazi ngakho ukuze kwehlulelwe ukuthi ngabe kuyinkinga yokwakheka yini noma cha, izandla zami zimbozwe ngamafutha kakade futhi lokho kuvela kuleli chungechunge , ngakho-ke ngibuze ukuthi sikwenza kanjani, kahle, sifika engxenyeni enamafutha ngempela yomsebenzi wokuhlanza futhi iketanga liyindlela engcono yokuhlanza iketanga lakho futhi ngizokuthola ukuthi ukwenze kodwa ngokuyisisekelo uma ukwazi ukubeka isikhundla ngebhayisikili ukuze ukwazi ukushova i-drivetrain ubheke emuva kuleli qophelo, ongakwenza ukuphalaza indwangu yakho kakhulu bese ubamba amaketanga njengoba uyiqhuba ngendwangu yakho futhi lokho kuzonikeza iqembu ukungcola okuningi z futhi uzofuna ukwenza lokhu uze ubone iketanga lidlula kabili noma kathathu, leli banga empeleni limnyama futhi lingcolile, lokhu ukungcola okugqoka indlela izingxenye nezingxenye zedrivetrain yakho ngakho-ke singathanda ukulandela lapho sesisuse konke ukungcola nokungcola, sibuyisela okokuthambisa emuva kuketanga ocingweni lwebhayisikili kukhona ushintsho oluzungeza idrayivu lapho ngiconsa idonsa noma ezimbili zokugcoba kusixhumanisi ngasinye, uma konke kumanzi ngiyazi ukuthi sekuyisikhathi sokungimisa cishe phakathi nendawo okwamanje ukuze ngikufinyelele, ngikwenze ngikulethele ukuqeda, ngisebenzise i-lube ngakho-ke ngibambe umlomo wombhobho ngqo iketanga akulungile kulungile lokho ungahamba ulwa nalo bamba iketanga, ulicindezele kancane Bamba mi Futhi lokhu mhlawumbe kuzoba nokudidizela kancane ukuze ukufune noma ungakufuni kukhaphethi egumbini lakho lokuhlala noma okuthile.
Mgo ukuze ngizokusula lokhu, lokhu kuhle kakhulu ukuthi kungenzeka ngokuphelele ukugcoba kakhulu. Kulula kakhulu ukumane usule okweqile uma usuqedile ngakho-ke ngikunikeza le ndwangu futhi ungaqhubeka nokusula okweqile ngakho ngivele nginyathele isisekelo bese ngibeka isandla sami phezu kweketanga ngendwangu nokuthi mangaki Izikhathi lapho kufanele ngikwenze Ngikwenze lokho uma ngisendleleni uma ushayela njalo esimweni sezulu esibi ungakwenza lokho cishe nsuku zonke uma ushayela kuphela ngezinsuku ezinelanga ehlobo mhlawumbe kanye njalo emavikini amathathu noma amane kuzokwanela Roger mhlawumbe ngimboze izinkulungwane zamakhilomitha agibele leli bhayisikili ngakho-ke ake sikhulume ngamathayi womoya womoya amathayi akho azohlala esho ngqo ohlangothini ukuthi ayini ubuncane netzar ephezulu kuleli thayi liphakathi kwamakhilogremu angama-40 kuya kwangama-60 kulungile-ke ngizoya phambili nokumpompa ukubeka ibhayisikili manje ake sibone ukuthi asikwazi yini ukufunda i-pressure gauge ngakho-ke ake sinyuke lapha noma avele acindezele amakhilogremu angama-30 futhi kuzwakale kuthambile ngingakuchoboza ngezandla zami kulungile, uma ukwazi ukusunduza isithupha sakho ekucindezelekeni siphansi kakhulu i-max ingama-65 futhi iw bengingavele ngibadudulele kuma-max ukuthi bavele bavuze noma kunjalo futhi uma uyicindezela manje, kufanele ungabe usakwazi ukuyicindezela yebo iyaqina impela angikwazi ukuyicindezela ngeminwe yami ngiyakwazisa kakhulu konke ngikhombise namhlanje nokuthi yini esele ebhayisikili lami ukuze ilifanelekele Ukwenza intwasahlobo, sizokwenza izilungiselelo zebhayisikili lakho, ngakho-ke izizinda kanye nalesi sihloko noma isiteringi ngizophinde ngilungise amabhuleki namagiya ebhayisikili bese ngizokwenza okokugcina kwenyama yegusha boltchec k kuwo wonke ama-hardware qinisekisa ukuthi yonke into iqinile futhi ilungele le nkathi izwakala kahle uma ngikushiya esitolo nalokhu noma kunjalo sizoba ngizoxoxa nawe maduze nje kulungile ngizokubona ezinsukwini ezimbalwa okuhle kakhulu ngithole ibhayisikili lami libuya ku-roger futhi wenze umsebenzi omuhle futhi umngane wami nami ukulungele ukugibela ibhayisikili. Impela iqala ngamathiphu amaningi amahle futhi kuhle ukuzwa ukuthi yini ongayenza ekhaya ukugcina ibhayisikili lakho lisesimweni esihle. Yebo uthanda ukuqaqa iketanga noma ukuligcina lihlanzekile bazokwelula impilo yamabhayisikili akho futhi baqinisekise ukuthi kungcono ukuphatha nokugibela ithenda kubukeka njengokuningi
ukukhiya kanjani ibhayisikili lakho
Ungakwazi ukugibela ibhayisikili elihamba ngasese wedwa?
Ungalokothigibela itandem wedwa. Ukuphakama kwesibalo sabantu kanye nenani lezimoto ezidlulayo, kulapho kulapho khonawenaizokhokhiswa.Uma ugibelaukuibhayisikilikuhle, ukwabelana ngeumbandelaiphindwe kabili kunokuphindwa.Meyi 31, 1996
Yini iphuzu lebhayisikili elihlangene?
TOumbandelaivumela abagibeli bamabhayisikili ababili abanamandla ahlukile kanye namandla okugibela ndawonye, ​​kamnandi. Umgibeli osheshayo akadingi ukulinda ohamba kancane; umgibeli ohamba kancane akadingi ukulwela ukuzama ukuhambisana nomgibeli osheshayo.
Libizwa kanjani ibhayisikili lomuntu ongu-2?
(umculo onamandla) - Le yiRad Power Bike entsha sha. Futhi ngiyeka abafana bayigqoke endlini (behleka). Basithumele ngeposi bathi bazosixhasa ngendatshana uma singaphumanga ebhokisini futhi siyibuyekeze bese siyigibela futhi siyiqhathanise namanye amaRad Power Bikes ethu.
Ngakho-ke ngifuna ukukwenza lokho - Ah, lokho kubuhlungu, kulungile, ngiyaxolisa - Kuyashisa kakhulu ngaphandle.
Ngakho-ke ake sikulethe ngaphakathi. Sizoyikhipha le nto. Musa ukuyidonsa.
Izonwaya phansi. (umculo onamandla) Nenze kahle bafo, ngijabule. Bengingacabangi ukuthi unezicubu. (umculo onamandla) Ivula i-athikili .- Yibhokisi elingaphakathi kwebhokisi. (umculo onamandla) - Ngabe yiyo leyo? Ngicabanga ukuthi lokhu yilokhu.- Bengikwazi. - Lokhu kuluhlaza kukhulu. - O, sekuvele kwakhiwe - Kuthi - Lokhu kuhle! (umculo onamandla) - Ngiyezwa. (umculo onamandla) - Ngifuna ukukushayela lokho, kubi impela.
Ngikwazi kahle ukwakha izinto. - Ngiyabonga ngosizo lwakho. - Kungaba.
Uyayifuna (ehleka)? - Umbono wokuqala, sisanda kuvula into. Bekulula kakhulu ukuyivula - Bekulula impela - Unala masondo akhetheke kuphela kumaRad Power Bikes angamasondo ajiyile, ngomqondo ongokomfanekiso. Kepha futhi zilungele umgwaqo njengoba zingenayo inyathela.
Ngakho-ke ukuxubana okuhle phakathi kwebhayisikili, i-moped, futhi njengebhayisikili elisetshenziswayo ofuna ukuhamba nalo edolobheni. Manje leli ibhayisikili lesishiyagalombili iRad Power Bikes elakhiwe, futhi yamuva kakhulu. Ngakho bathathe okungcono kakhulu kunawo wonke amabhayisikili ababenawo bawafaka kuleli bhayisikili.
Ngiyazithanda zonke izintambo zokuphathwa kwentambo zonke zihlanganiswe ngobunono. (umculo onamandla) Bese kuba khona i-fender ngaphambili, i-fender ngemuva. Ngakho-ke uma uhamba emanzini noma odakeni, ngeke kukujike. (umculo onamandla) Ungahlala phansi ngomhlane bese udonsela lezi zikhonkwane phansi.
Futhi vele uhlale kuwo bese ushayela. Ngabe ngiyilungisile? Linda ungahambi Kulungile, asihambe okwamanje (ehleka). Isitendi silula impela.
Unokhiye wokukhiya amabhethri akho. Ngakho-ke uma uyikhiya ndawo ndawo, okungenani ngeke bakwazi ukusiqashisela ibhethri lapho ukhipha ibhethri. Omunye umuntu usengantshontsha ibhayisikili lakho uma ungalikhiyi kahle.
yini i-strava ku-fitbit
Ngicabanga ukuthi sinabanikazi bawo wonke amaRad Power Bike ake aphuma. Njengamanje cishe kungama-degree ayi-107 ngaphandle. Ngakho-ke sizolinda kuze kube kamuva bese sigibela amabhayisikili ethu aphelele weRad Power Bike.
Futhi bona ukuthi sicabangani ngalo mfana. Uyahamba? - Yebo - Nanguya lapho. Ngakho-ke enye yezinto uLincoln ayithandayo ngayo - ngicabanga ukuthi kufanele kube nguwe osho lokho. - Yebo, ngakho-ke enye yezinto engizithandayo ngaleli bhayisikili ukuthi kunezikhonkwane.
Lapho umzala wami uGrant eqala ukugibela ibhayisikili, ngingahlala nje emuva. - Uma nje ukwazi, ngicabanga ukuthi amakhilogremu ayi-150 umkhawulo womhlane wakho. Kepha awunasisindo esingaphezu kuka-150, akunjalo? - Cha (umculo onamandla) Wahoo, nawe ungasukuma! (Amabhuleki ancwina) (wonke umuntu uyahleka) - Lona ngumndeni wethu wamanje weRad Power Bikes.
Sesinabo cishe iminyaka emithathu manje. Ngaso sonke isikhathi lapho wakha ibhayisikili elisha, uyakwazi ukuthatha okufundile kwangaphambilini ukukufaka kokusha. Ngakho-ke njengamanje ungathi leli ibhayisikili elihamba phambili abanalo.
Lokhu kubizwa ngeRadCity. Futhi inezinciphisi ezishaqisayo. Kwesinye isikhathi sisebenzisa lokhu ngokwesibonelo amathrekhi asemgwaqweni nokunye.
Besilokhu sizithenga lezi zinto kusukela thina Yini esebhayisikili likagesi? Kwakuyisikhathi eside esedlule cishe eminyakeni emithathu. Kuhle kakhulu ukuzungeza nomndeni nokuhamba nje uhambahamba 'zilungele abantu abaningi, ikakhulukazi umuntu onjengami othanda ukushayela kwesinye isikhathi. Kepha ikakhulukazi ngithanda ukuthi ibhayisikili lingicindezele lapho ngidinga ukuya khona.
Abantu abaningi abanjengayo emadolobheni amakhulu bangakusebenzisa lokhu ukuyisa izingane zabo esikoleni, ukuqhuba imisebenzi ethile, noma ukuyisebenzisa njengebhayisikili yezimpahla. Imvamisa sithola ibanga lamamayela angama-20 kuye kwangama-30 kumaRad Power Bikes ethu, imvamisa amabhayisikili kagesi abiza u-5,000, $ 6,000 - Ayabiza ngokusangana - Kunzima ukuthola i-Ele Ctric Bike noma i-E-Bike engaphansi kwezindleko zama- $ 2,000 Dollars. Futhi ungagibela le RadRunner nabantu ababili abehlukene futhi iqala ku-1,299.
Ungathola ezimbili noma ezintathu zalezi zinto futhi wonke umndeni wakho ungazigibela ngezindleko ezifanayo nebhayisikili kagesi eligibela ibhayisikili lezintaba ohamba ngalo. Ngiyabonga iRad Power Bike ngokuxhasa le ndatshana nokusinika ukufinyelela okukhethekile. Leyo nto yavele yawa.
Uma ufuna ukuyihlola, ungabheka isixhumanisi encazelweni. - Kukhona ezansi lapho. - Ukubuyekezwa kwebhayisikili kagesi kuyaqhubeka.
ULincoln ungapha ubeka amakati ekhreyithini. - Ngempela. - Ngenkathi uGrant noBrandon benza wonke umsebenzi wokusetha ibhayisikili.
Umsebenzi omuhle, uGrant. - Ngiyabonga. - Hawu, ilanga likhanya kakhulu.
Hawu, lokho kwakukhanya. (Amabhuleki ayakhala) (uDani uyahleka)
yini ama-v ups
Ngabe amabhayisikili ama-tandem ayakufanelekela?
TOumbandelakuthatha amandla abagibeli bobabili futhi akubeke ekudluliseni okufanayo ngakho-ke akunandaba ukuthi umgibeli othile usebenza kanzima ukwedlula omunye. A efanelekayoumbandelakungaba yindlela enhle yokwethula izingane emakhonweni okugibela aibhayisikiliemgwaqeni, futhi abazali abaningi bakhetha yona kunesosha elincaneamabhayisikilinoma i-traileribhayisikili.UJan 3, 2018
Ngingakwazi yini ukugibela ibhayisikili elihamba ngohlangothi uma ngingazi ukuthi uligibela kanjani ibhayisikili?
Impendulo emfushane ithihhayi, isitokofelaakunjalongidinga ukuukwazi ukugibela ibhayisikili. Ngikhiphe isitokofela esingenalwazi eminyakeni engama-70 ebesiyimpumputhe selokhu kwazalwa. Kodwa-ke mhlawumbe izimpumputhe zenza izitokofela ezingcono njengoba zijwayele ukwethemba abantu ukuthi bazozihola.Februwari 19, 2020
Ngabe bobabili abantu kufanele bahambise ibhayisikili elingumugqa?
Kumuntu oyedwaibhayisikili elingaphansi, izithandani ezihamba ngejubane elihlukile kumuntu ngamunyeamabhayisikilibangahlala ndawonye futhi baxoxe kalula ngalo lonke uhambo. Ukugibela aumbandelakudinga ukusebenzisana, noma kunjalo. Kwabaningiemabhayisikili tandem, abagibeli kumeleisinyathelongokuvumelanisa ngesilinganiso esifanayo, okusho ukuyekethisa.Sep 22, 2013
ukugeza umlomo nokuvivinya umzimba
Singakanani isisindo sebhayisikili elihamba ngasikhathi sinye?
Kanjaniisisindo esiningi singabamba ibhayisikili elihamba eceleni? Lokhu kuya ngeumbandelaifreyimu. Sibonileumbandelaamaqembu aneqembu elipheleleisisindoongafika kumakhilogremu angama-400.
Ingabe ibhayisikili elihamba ngojubane liyashesha?
TOumbandelangumndeni osebenza kahle kakhuluibhayisikili, bha akekho. Abantu abadala ababili bangahambaNgokusheshakunomuntu omdala oyedwa ngedwaibhayisikilingoba, ngenkathi uphinda kabili amandla, isisindo asiphindwa kabili (eyodwaumbandelailula ukwedlula ama-solos amabili), futhi ukumelana nomoya kuhlala kucishe kufane.UJan 17, 2017
Ingabe amabhayisikili ama-tandem ahamba ngokushesha okukhulu?
TOumbandelakuvumela abagibeli ababili bamakhono ahlukahlukene ukujikeleza ndawonye ngaphandle kokuthi kushiywe muntu ngemuva. Abantu abadala ababiliingahamba ngokusheshakunomuntu omdala oyedwa ngedwaibhayisikilingoba, ngenkathi uphinda kabili amandla, isisindo asiphindwa kabili (eyodwaumbandelailula ukwedlula ama-solos amabili), futhi ukumelana nomoya kuhlala kucishe kufane.UJan 17, 2017
Yini eyenza ibhayisikili elingumugqa ibhayisikili elingumugqa?
Ibhayisikili elihamba eceleni lihamba nelambu langaphambili elenza lisebenzise ibhayisikili ubusuku nemini ngaphandle kokukhathazeka ngokuphepha kwakho. Iphuma nokungeziwe okubandakanya i-double kick kickstand, ilambu langaphambili, izibopho zokukhululwa kwesihlalo esisheshayo, i-rack yangemuva, isondo langaphambili lamahhala nama-fenders.
Iqale nini i-Co Motion ukwenza amabhayisikili ama-tandem?
Umjikelezo weTandem Bikes Co-Motion ukhulise idumela lawo lokukhiqiza omahlathi abaziwa umhlaba wonke selokhu saqala ngo-1988. Sibeka isimo sendlebe endlebeni yethu ngemigwaqo yethu yokuqala yomgwaqo, siqhakambisa impumelelo yomjaho ezigabeni zasekhaya, zikazwelonke nezamazwe omhlaba .
Iyiphi ibhayisikili elihamba phambili elihamba phambili lokuhamba ngamabili?
I-KENT Northwoods Dual Drive Tandem Bike Leli ibhayisikili elisezingeni eliphansi elinomsebenzi osindayo noqinile ovumela ibhayisikili ukuthi libambe abantu aba-2 ngokunethezeka. Iza nama-Shimano shifters angama-21-speed akunika isipiliyoni sokugibela esingenamsebenzi.